Kusvira kwandakaita mukadzi wemunhu muChikomo, musango – Vanoda Zvinhu
Ndini uyo, kwangu kubasa kwando shanda ndiri zvangu freelance sales rep. Ndo shanda ndiri mu retail market.
Ndo nyanyo dealer nema supermarkets.
Right, mumarket imomo ndo mandaka sangana na amai vandirikuda kutaura nezvavo. Amai ava vaigara vachifarira zvekutaura neni chaizvo although ndandisinga dealer navo zvangu. But vakabatana zvekuti kana ukavaona unogona kunzwisisa kuti sei muedzo wakazondikunda.
Type yavo ndeimwe yechi dhafu korera but chine shape manje plus tan colour. So.. one day ndaita zvangu se sketch ndikavati ndipeiwo number dzenyu, aaah kubva ndapihwa wena.
Ini ndaifunga kuti amai ava havana murume. Ndapihwa number dziya 30min after ndabuda shop mavo ndakabva nda fona ndichida ku verifier kuti handina kupihwa number dzepa towerlight here? ndikanzwa inga ndivo varikudaira, ndakabva ndangoti ndandichida kuku udza kuti ndakuenda. Zvikanzi bhoo.
Amai ava vanga vagara vataura kuti the following day vanenge vari off. Saka ndakavaudza kuti ndaizo vafonera mangwana acho.
Mwangwana acho ndabva ndavapinzira phone kuma 10:00am. Vabva vati vaive kumba ini ndikabvunza kwavaigara zvikanzi ku Glenora ini ndanga ndiri ku Highglen ipapo. Ndikati ndouya kuzokuona here? zvikanzi huya heyiii!
Ndini uyo ndakabva ndangoenda ikoko. Ndasvika pachitubu kubva nda fona futi, zvikanzi mira ipapo am coming.
Sezvinei pasina kanguvana ndakaona mwana wevanhu achiuya achiita kakukanyara ndikati nhasi zvangu. Achingo svika zvikanzi ngatitsvagei kuri quiet timbonotandara. Ndakabva ndati ngatipindei mukombi. Kubva tananga kutwn. Mutown ndakatengawo zvekuti tigozono dyira dyira. Takakwira umwe muchovha waienda ku DZ kubva taburukira pa National sports stadium. Takabva tangokwira zvedu muchikomo chiri ipapo.
Taka dyira dyira tichikurukura ndopandakatanga kuudzwa kuti ndine murume. Hee anogara ari drunk achiuya kumba very late.
Varume kana muchimwa doro zivai kuti kumba kune vakadzi vachazodawo kusvirwa.
Ndikati no problem neniwo mukadzi ndinaye haisi nyaya stereki stereki.
Ndakatanga kuvapuruzira nechemumatama umu, ndobva ndanovati rino zikisi, ndikaona haikona wena, varikotodzorerawo heavy kuratidza kuti ginger riri tii.
Ndakapinza ruoko mublouse ndikatanga kumabata mazizamu avo, ndichimachinjanisa ndichitamba netwu ma niples twavo. Ndakatanga kuyamwa mazamu aya rumwe ruoko rwuchi bata ka beans pamwe ndombo bata matinji.
Ndakanzwa mai yava kufemera pamusoro,ndikazonzwa yakuita kunge irikusekerera. Beche kubva rati nyakata.
Ndakasimudza musoro kuti ndione kuti hapana ainge achitiona here ndikaona kuti taingova tiri two chete ne shiri dzesango.
Ndakakwidza skirt yavo ndikadzikisa pant ndikaona varikutosimukira kuti ndinyatsobvisa zvakanaka.
Ndakapinza two fingers dzangu mubeche ndobva ndanosvika Pa G sport chaipo. Pa area apa pakaipa pane twuma hump twuri spongy spongy so.. saka ndakaro finger fuking spa ndichi svisvina kabeans nematinji one by one. Ruoko ruchingo tambisa minyatso yemazamu.
Ndakaona vakuda kubatirira musoro wangu ndikaziva kuti vakuda zvekunditundira mukanwa, kubva ndaregedza. Ndaka zvomora condom rangu vakandiyeva kubva ndaipfekedza, kubva ndangoipfekera mubeche mavo tiri pa missionary possition.
Ndakava svira zviri vigorous ndikanzwa mhere yakwetsurwa ndakambundikirwa zviya zvekuti kana movement yakambo restristwa speed yekukwira ika reduswa futi.
Ndakabva ndati too late, ndobva ndatora mambo avo ese kubva ndamapeta mheche yese kwabva yasara pamhene.
Ndakavakwesha zvakaipa vachichimerera zvisingaiti. Ndakanzwa zvakunzi huya nepa side tabva tachinja angle ne style zvese kubva taenda pa spoon position. Apa ndaikoira ndichipuruzirw ndichimbokiswa kiswa pandakati wedzerei speed ndakanzwa mhere yawedze ndichiudzwa kuti ende unonaka wena, ini ndikati newewo..
Hazvina kunditorera nguva kutunda, asi this tym takatundira becausen ndakaona munhu ashatisa kumeso apa achitora ma deep breath uku mboro yangu ichiita kunge irikuyamwiwa hurume hwese. Ndakabva ndatanga kunzwa beche richi vhita vhita zvinesimba apa ndaka kochekerwa nemakumbo.
Ipapo ndakadira hurume hwese, dai yaiva nyoro kana kunhumburisa dai ndaka nhumburisa.
Takazoparadzana avakudzokera kwake ku Glenorah ini ndakuenda kwangu ku Mufombi.
Akazotanga kundi texitira achitaura kuti nguva yese waivepi? Dai uri iwe wakatondibvisa hako humhandara ndava wakandiita zvandisati ndamboitwa. Kubva ndabvunzawo kuti zvipi izvozvo? Zvikanzi zvekundidya beche…
Next story Ndakamusvirira skirt ye Blue.
Previous story Inzwa zvandakazosanga nazvo pamarondera ndichibva kwamutare